Enrique oo si jees jees ah kaga jawaabay suurtagalnimada uu ku noqon karo badalka Lopetegui ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Enrique oo si jees jees ah kaga jawaabay suurtagalnimada uu ku noqon karo badalka Lopetegui ee kooxda Real Madrid
(Spain) 04 Okt 2018.Tababaraha xulka qaranka Spain Luis Enrique ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kadib markii uu maanta ku dhawaaqay liiska xidigaha La Roja ee kaga qeyb galaya kulamada Wales iyo England.
Luis Enrique ayaa wax laga weydiiyay inta uu ku gudi shirka jaraa’id suurtagalnimada uu ku leylin karo kooxda Real Madrid si uu u noqdo badalka Julen Lopetegui, laakiin macalinka reer Spain ayaa durba ka bixiyay jawaab cad.
“Maxaa dhacaya haddii Real Madrid ay xiriir ila soo sameyso? waa su’aal fiican, laakiin tani waa shuruud, xili kasta waxaad weydiisaan maxaa, maxaa iyo maxaa”
“Dadka wadooyinka ima weydiiyaan arintan, laakiin tani waxay ka dhacdaa saxaafada, waxa aan ka hadleyno waa xulka qarank Spain ee maahan koox”.
“Wax fiican ayuu sameeyay Julen Lopetegui, kadib markii uu nasiyay Ramos kulankii ugu dambeeyay, waa inaan ciyaartoyda siinnaa nasasho, sababtoo ah 3-dii maalinba waxay ciyaaraan kulan, taasina waa waxa i walwal galinaya”.
Ma maqashay wixii Xalay dhex maray Maxamed Saalax iyo Carlo Ancelotti?....(Bal Arag adigaa YAABI doonee!!)
Érik Lamela oo u mahad celiyay Lionel Messi inkastoo ay guuldaro kasoo gaartay kulankii xalay ee Champions League